Sawirro: Isbitaalka Warsheekh oo la mahdiyay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Isbitaalka Warsheekh oo la mahdiyay
Sawirro: Isbitaalka Warsheekh oo la mahdiyay
Isbitaalka degmada Warsheekh ayaa noqday mid la mahdiyay oo daboola baahida dadweyne ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolada ku gadaaman oo dadka ku nool usoo adeeg doontaan.
Isbitaalkaani oo dhidibada loo taagay sanadkii 2019 ayaa waxaa hirgelintiisa ku bahoobay dallada War-Mo-Cad international, wuxuuna daboolay baahidii hooyada iyo dhalaanka iyo in dadka deegaanka caafimaad u raadsadaan magaalada Muqdisho. Isbitaalka Warsheekh ayaa noqday mid daboola baahida dadka deegaanka iyo in gobolada kale ee dariska la ah Shabeellaha Dhexe sida Galgaduud usoo adeeg doontaan, waxaana qofkii ugu horeeyay ee deegaan fog usoo adeeg doonta ay noqotay Shamsa Muxuddiin oo ka timid degmada Ceelbuur, taasoo isbitaalka u fuliyay in laga umuliyo wiil ay ku dhashay isbitaalka.
Xaliima Cabdi Buraalel oo ah habaryarta Shamsa Muxuddiin ee ku umushay isbitaalka degmada Warsheekh ayaa sheegtay in mudo seddax maalmood ah ay ku foolaneysay degmada Ceelbuur ayna waayeen isbitaal caalami ah, midka ugu sokeeyana uu noqday kan degmada Warsheekh, iyadoo u mahad celisay dhaqaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalka. Naciima Muxuddiin Cali oo ah umulisada isbitaalka Warsheekh iyo kalaasiyooyinka la shaqeeya ee kala Aweys C/qaadir Xaajiyo Beella Cabdi Cali ayaa har iyo habeen u taagan inay u gargaaraan cid walba oo isbitaalka usoo doonta adeeg caafimaad hadey ahaan laheyd dhalmo, daweyn iyo talooyin caafimaad.
Madaxa guud ee isbitaalka Sakariya Meyre ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in adeega caafimaad ee uu fulinaayo isbitaalka degmada Warsheekh noqdo mid aan xuduud laheyn oo looga yimaado gobolada deriska la ah Shabeellaha dhexe.
“Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in isbitaalka Warsheekh uu xudduudaha jabsaday maantana aan arkeyno in hooyo Soomaaliyeed oo ka timid Ceelbuur, gobolka Galgaduud lagu soo dhoweeyay si nabadgelyo ahna ugu umusho” ayey ayey yiraahdeen maamulka Warmo-Cad International ee isu xil saaray in dadka degmada Warsheekh iyo guud ahaan gobolka Sh/Dhxe helaan adeeg caafimaad, mid waxbarasho iyo biyo nadiif ah. “Amaantaasi waxaa iska leh bahda War-Mo-Cad international kheyr Allaha kasiiyee, waxaan rajeynayaa in heerka maanta gaarsiisan yahay uu ka saro maro bi’idnilaahil, Ajar aan xisaab laheyn Rabbi haka siiyo muxsiniinta u taagan Isbitaalkaas Degmada Warsheekh” ayey intaa sii raacisay Falistiin Xaaji Maxamuud oo ka mid ah Golaha dhexe ee Warma-Cad.
Isbitaalka degmada Warsheekh ayaa waxaa ka faa’iideysta hooyada iyo dhalaanka gobolka Sh/Dhexe iyo gobolada kale ee ku gadaaman, waxaana hirgelintiisa iska kaashay Ururka Warmo-Cad iyo jaaliyadaha ku mideysan ee Yurub iyo Ameerico. Shine Macallin Daa’uud iyo Dr. Maxamed Cabdi Alifleey oo ah madaxa dallada ururada Warma-cad International ayaa bogaadiyay howsha isbitaalka degmada Warsheekh, isagoo u mahad celiyay guud ahaan iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta iyo in uu shaqeeyo isbitaalka degmada Warsheekh oo noqday mid lagu tiirsado, wuxuuna si gaar ah ugu mahad celiyay jaaliyaddaha dalalka North America, Yurub oo ay kala yihiin Googaar Foundation UK, Jaaliyadda Finland, Warmo Cad Swedan, Jaaliyadda Denmark,Norway, Jarmalka, iyo South Africa.
Isbitaalka Warsheekh ayaa ah mid ay ka faa’iideystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka deeganad Hirshaballe, Galgaduud iyo dad masaafurka ah ee u kala goosha Muqdisho iyo Gobolada Dhexe, wuxuuna bishiibai gargaar u fidiyaa dad dhan 5,000 oo isgu jira daaweyn bukaanada kala duwan, dhalmo iyo daaaweynta caruurta.